Kacha mma nke CES 2018 | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Ngwa, General
Site na CES 2018, ihe ngosi teknụzụ kachasị ukwuu na Las Vegas, karịa, oge eruola ka ị mechie. N'ime oge ngosi a, anyị enweela ike ịhụ site na nnukwu telivishọn, na ngwa ndị ejikọrọ, site na laptọọpụ dị elu, smarpthones ... ngwaahịa ọ bụla eletrọniki enweela ebe a na-egosi ihe ngosi.
Ndị nrụpụta ndị isi sitere na mpaghara niile egosila anyị ngosipụta nke ngwaahịa niile ga-erute ọha na eze n’ime afọ niile, ebe ruo afọ ọzọ, televishọn na monitors dọtara uche pụrụ iche. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ngwaahịa na ngwaọrụ ndị na-adọrọ mmasị nke ngosi a, nke a bụ nchịkọta yana nke kacha mma nke CES 2018.
1 CES 2018 na TV, Monitors na Projectors
1.1 LG 88-anụ ọhịa 8k OLED TV
1.2 LG 65 nke anụ ọhịa OLED TV
1.3 LG 4-anụ ọhịa 150k projector
1.4 65-anụ ọhịa NVIDIA nyochaa
1.5 Samsung curved monitor na QLED teknụzụ
1.6 146-anụ ọhịa TV si Samsung
1.7 Nzọ Sony na telivishọn maka 2018
1.8 Panasonic na-etinyekwa na teknụzụ OLED na igwe onyonyo ya maka 2018
2 CES 2018 na Ngwa
2.1 LG 29 `` Clear ihuenyo ngwa nju oyi
3 CES 2018 na telephony, foto na ngwa mkpanaka
3.1 Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2
3.2 Dum nso Alcatel 2018 ga-enwe ihuenyo na usoro 18: 9
3.3 Project Linda na-enye anyị ohere ịgbanwe ekwentị Razer na laptọọpụ
3.5 DJI Osmo Mobile 2 na Ronin S
4 CES 2018 na akwa
4.1 UBU, akpa modular wearable
4.2 Casio G-Shock nwere amamihe
5 CES 2018 n'eziokwu na imewanyewanye eziokwu
6 CES 2018 na Mgbakọ
7 CES 2018 na ụda
7.1 JBL na-ekwuputa igwe okwu okwu ya
8 CES 2018 na akụrụngwa
8.1 Byton, SUV nke ọdịnihu
8.2 Fisker E-ngagharị
9 CES 2018 na robotik
9.1 Nwa nkịta Sony, Aibo, na-enweta ndozi
CES 2018 na TV, Monitors na Projectors
LG 88-anụ ọhịa 8k OLED TV
Firmlọ ọrụ Korea nke LG na-etinye aka anyị, ọ bụrụ na anyị nwere ego iji kwụọ ya, mbụ 88-anụ ọhịa OLED TV na mkpebi 8k, nke ọ na-agaghị ekwe omume ugbu a ịchọta ọdịnaya. Modeldị kachasị na-eji otu teknụzụ, OLED ma dị ugbu a n'ahịa, na-enye anyị nha nke 77 sentimita asatọ na mkpebi 4k. N'oge a, LG agwaghị maka ụbọchị mmalite nke TV a dị egwu ma ọ bụ ụbọchị mmalite ahịa.
LG 65 nke anụ ọhịa OLED TV
N'ịga n'ihu na televishọn na ụlọ ọrụ Korea nke LG, ụlọ ọrụ a ewepụtala mbụ iphe-ẹji, e meru, telivishọn na-enye anyị a Nkọwa 4k na nke ahụ na-ejikọkwa usoro ụda n'ime ihuenyo, ekele maka Crystal Crystal Tech usoro, sistemụ Sony amaliteworị iji ụfọdụ n'ime ụdị ya dị elu. Ọ bụ ezie na teknụzụ a ka dị oke ọnụ, ọ bụ nzọụkwụ mbụ ka oge na-adịghị anya anyị nwere ike ịmalite ịhụ smartphones ma ọ bụ laptọọpụ nwere ụdị ihuenyo a yana na ha enweghị oghere dị ala karịa ka ha na-ebi ugbu a. Dị ka ọ dị n'ụdị gara aga, ụlọ ọrụ Korea ekwughị maka ụbọchị mmalite ma ọ bụ ọnụahịa nke ngwaọrụ a ga-enwe mgbe ọ na-akụ ahịa ahụ.
LG 4-anụ ọhịa 150k projector
N'ime ụdị ndị ọrụ ngo, anyị hụrụ LG projector ọhụrụ, projector nke na-enye anyị ihuenyo 150-inch na-akwado mkpebi 4k. Nlereanya a, aha ya bụ HU80KA, es kwekọrọ na teknụzụ HDR10 ma nye anyị ọkụ ọkụ nke 2.500 lumens. O nwere okwu 2 nke 7 watts nke ike, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwalite ụda ahụ, anyị nwere ike ijikọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro okwu okwu 7.1. N'ime, anyị na-ahụ sistemụ arụmọrụ webOS na mbipute 3.5, yabụ anyị nwere ike iji ya mee ka anyị nwee ọ enjoyụ vidiyo ikpo okwu kachasị amasị anyị maka njikọ Gigabit Ethernet. Banyere njikọ ndị ahụ, HU80KA na-ejikọta njikọ HDMI na njikọ USB. Gwọ na ụbọchị mwepụta: akọwapụtaghị ya.
65-anụ ọhịa NVIDIA nyochaa
NVIDIA chọrọ ịbanye na nnọkọ ahụ, ma gosipụta n'oge CES nyocha nke anụ ọhịa 65 nke elebara anya maka ọtụtụ ndị egwuregwu, yana atụmatụ ndị siri ike ịchọta na ahịa taa. Nke a ileba anya aha ya bụ "Big Format GAming Display" na-enye anyị a Ihuenyo 65-anụ ọhịa nwere mkpebi 4k, na-akwado teknụzụ HDR, nits 1000 nke nchapụta, ọnụọgụ ume nke 120 Hz na latency nke na-erughị 1 ms. Ọ dakọtara na Google Assistant ma nwee Android TV n'ime ya, yabụ anyị nwekwara ike iji ya kporie uru niile Google platform a na-enye anyị.
Samsung curved monitor na QLED teknụzụ
Ọsọ mpi LG na ngalaba ngosipụta, Samsung, egosila anyị akụkọ na mpaghara a, nke mbụ 34-inch curved monitor na QLED teknụzụ na Thunderbolt 3 njikọ. Nyochaa ọ na-enye anyị mkpebi nke 3.440 x 1.440 na njedebe nke 4ms, ezigbo maka ndị ọrụ ahụ niile chọrọ ịnụ ụtọ ileba anya a. Ekele maka njikọ Thunderbolt 3 anyị nwere ike nweta ọkwa mbufe ruo 540 Gbps, ugboro 4 karịa ngwa USB 3.0. Gwọ na ụbọchị mwepụta: akọwapụtaghị ya.
146-anụ ọhịa TV si Samsung
Samsung emeela nnukwu TV a dị ka Mgbidi, a modulu telivishọn na anyị nwere ike ime ka ibu ma ọ bụ obere gbanwee maka mkpa nke ndị ọrụ, yana njedebe nke 146 sentimita asatọ, na-enweghị mbenata mkpebi ma ọ bụ ogo ihuenyo n'oge ọ bụla. Samsung ahọrọla teknụzụ MicroLED, nke na-enye ya ohere iwepụ azụ azụ, ebe ọkụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'adabereghị. Ọnụ na nnweta: akọwapụtaghị ya
Nzọ Sony na telivishọn maka 2018
Ndị otu mba Japan, Sony, achọghị ịhapụ n'ime otu mpaghara ahụ nke na-achịkwakarị ọdịnala, televishọn na n'ime usoro nke CES gosipụtara nzọ ya maka afọ a, ebe ojiji nke OLED teknụzụ, gam akporo TV, sistemụ ụda Crystal na mkpebi 4k. Mụtakwuo maka Sony TVs maka 2018. Sony ejirila ihe omume ahụ mee ihe megharia ụda ụda gị dị elu maka igwe onyonyo gi.
Panasonic na-etinyekwa na teknụzụ OLED na igwe onyonyo ya maka 2018
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ ọ bụla, na teknụzụ OLED abịawo ma bụrụ naanị ụdị ihuenyo dị na ahịa, ụlọ ọrụ Japan Pananosic egosila nzọ ya site na teknụzụ a na telivishọn na ga-ebido n'ahịa ahụ na 2018.
CES 2018 na Ngwa
LG 29 `` Clear ihuenyo ngwa nju oyi
Enweghi ike ịhapụ friji ndị ama ama na CES a. LG na-enye anyị ụdị ThinQ, friji nwere 29-anụ ọhịa ihuenyo mmetụ na dịtụ transperent otú anyị nwere ike ịhụ n'ime ngwa nju oyi ịme ọpịpị nwayọọ na ihuenyo. Sistemụ arụmọrụ webOS yana Amazon's Alexa, na-ahụ maka ịchịkwa ngwaahịa nke ngwaahịa anyị nwere oge niile na ichetara anyị ndị anyị ga-enye iwu site na Amazon ma ọ bụ gaa na nnukwu ụlọ ahịa anyị. Ọnụ na nnweta: akọwapụtaghị ya.
CES 2018 na telephony, foto na ngwa mkpanaka
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2
Ọ bụ eziokwu na njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Japan bụ Sony abụghị ihe dị egwu, kama ọ bụ ndakpọ olileanya, anyị enweghị ike ịkọwapụta ngosipụta nke ụdị Sony ọhụrụ atọ ahụ n'etiti etiti. Anyị amaghị ihe na-agafe isi nke ndị na-ahụ maka nkewa mkpanaka nke Sony, mana ọ bụrụ na ha gaba n'ihu n'okporo ụzọ a, obere ụzọ ka fọdụrụ ha na mpaghara ekwentị. na Akụkọ a Nwere ike ịhụ nkọwa niile nke ụdị atọ ọhụụ ndị Sony gosipụtara na CES a na ndị ahịa na nnweta ha amaghị ugbu a. Anyị ga-echere MWC ka ị hụ nkwenye nke Sony na njedebe dị elu na mpaghara telephony.
Dum nso Alcatel 2018 ga-enwe ihuenyo na usoro 18: 9
Alcatel egosila n'ime usoro nke CES, ọtụtụ ngwaọrụ ọ ga-ebupụta n'ime afọ niile, nke dịkwa emi esịnede utịt ita ihe mkpuchi ahụ elu-elu, etiti-etiti na ala-ọgwụgwụ. Mana ihe kacha dị egwu bụ na ụlọ ọrụ ahọrọla imejuputa usoro ntanetị na usoro 18: 9 na ha niile, n'ihi eziokwu ahụ bụ na TCL, onye nrụpụta na-ahụ maka mmepụta ya, nwere osisi nke ihuenyo LCD, yabụ ọ na-eme ọ bụghị na ọ gaghị enwe nsogbu maka akara French ma ọ gaghị eme ka ọnụahịa ikpeazụ ha dị oke ọnụ.
Project Linda na-enye anyị ohere ịgbanwe ekwentị Razer na laptọọpụ
Onye mepụtara ngwa maka egwuregwu, gosipụtara ọnwa ole na ole gara aga, ngwa, nke n'oge a bụ ọrụ, nke na-enye anyị ohere gbanwee ekwentị Razer anyị na laptọọpụ nke anyị ga-eji nwee ike nweta ọtụtụ ihe na ekwentị anyị na atụmatụ niile ọ na-enye anyị ọ bụghị naanị mgbe anyị na-egwu egwuregwu, kamakwa mgbe ị na-edezi foto, ide akwụkwọ na ụzọ dị mma karịa na keyboard backlit ... Anyị nwekwara ike ijikọ òké ka mmekọrịta na ngwaọrụ ahụ wee dị mma dị ka o kwere mee.
Onye Japan dị iche iche Panasonic, ewepụtala ọgbọ nke abụọ nke Lumix GH5, GH5S, ihe nlere nke puru iche karie, site na onye bu ya uzo, maka okwa ISO nke o na-enye anyi, nke esịmde 51.200, ọnụ ọgụgụ nke enwetara site na ihe mmetụta 10 mpx ọhụrụ nke ihe nlereanya a na-enye anyị, ihe atụ nke, dị ka nke gara aga, ezubere maka ndị ọkachamara vidiyo, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro ndekọ ọ na-akwado. Ọ ga-ada ahịa na ngwụsị February maka $ 2.399.
DJI Osmo Mobile 2 na Ronin S
DJlọ ọrụ DJI gosipụtara na CES na Las Vegas, ọgbọ nke abụọ nke stabilizer (nke a na-akpọ gimbal) maka ngwaọrụ mkpanaka: Osmo Mobile 2, ngwaọrụ nke hụbeghị ọnụahịa ya belatara, kamakwa gbatịkwuo nnwere onwe ya ruo awa 15. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri nke DJI ebuputakwala gimbal ọhụrụ maka enyo enyo na SLR, nke anyị nwere ike iji mee ndekọ na nkwụsi ike siri ike ịbanye igwefoto a.
CES 2018 na akwa
UBU, akpa modular wearable
Ugbu a n'ahịa, anyị nwere ike ịchọta naanị nhọrọ abụọ dị mma n'ahịa smartwatch: Apple Watch na Samsung Gear S3. Enwere ike ịhazi ụdị abụọ ahụ na eriri, eriri ndị na-anaghị arụ ọrụ ọ bụla, nhọrọ ha na-efu n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Ntugharị Ọ bụ smart watch na onye ọrụ n'onwe ya nwere ike ịhọrọ ọrụ ọ chọrọ na smart smart a akụkụ nke ọnụahịa $ 259 nakwa na ọ ga-abawanye n'ọtụtụ dị ka modulu - ma ọ bụ njikọ - agbakwunye na eriri. Ugbu a ị nwere modulu 6 ịhọrọ n'etiti nke anyị na-ahụ: ihe mmetụta gburugburu ebe obibi, ihe mmetụta obi, LED modul maka ọkwa, onye nata GPS, batrị ọzọ na bọtịnụ smart.
Casio G-Shock nwere amamihe
N'ime afọ abụọ gara aga, Sony ewepụtala ọtụtụ ụdị akwa dị iche iche, n'ime usoro G-Shock, ekike nke ahụ agafewo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghi mgbu ma ọ bụ ebube site na ahịa. Ma o doro anya na ọ naghị atụba ákwà nhicha ahụ ma wepụtara nsụgharị ọhụrụ akpọrọ Casio G-Shock Rangeman, A smartwatch anyị nwere ike iji dị ka GPS iji soro na mepụta ụzọ n'ụzọ dị mfe. O nwere ebe altimita na barometa, enwere ike itinye ya na ike anyanwụ (na mgbakwunye na chaja wireless gụnyere). Ọ na-ejikọkwa compass ma na-enye anyị ụdị nchebe nke G-Shock dị iche iche, na-eguzogide ọgwụ na mmiri na uzuzu site na nchebe roba nke contour ya na-enye anyị. Ihuenyo bụ monochrome, ọ na-enye anyị awa iri atọ na atọ nke nnwere onwe, iko ahụ bụ nke sapphire na ngwaọrụ ndị ọzọ bụ nke eriri carbon. Nke kachasị njọ bụ ụgwọ, nke Ọ gaghị aga n'okpuru euro 700 ma ga-amalite iru ahịa na mmiri.
CES 2018 n'eziokwu na imewanyewanye eziokwu
HTC kwenyesiri ike ọgbọ nke abụọ nke gị mebere eziokwu ngwaọrụ, baptizim dị ka HTC Vive Pro. Improveddị a ka mma na-enye anyị mkpebi na ugbu a anyị enweghị ike ịchọta na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, ekele maka ihuenyo OLED ya na mkpebi nke 2.880 x 1.600 pikselụ, nke na-anọchite anya mmụba mkpebi nke 76% ma e jiri ya tụnyere usoro gara aga. Ume ume ọhụrụ na-abawanye ruo 75 Hz, na-enye anyị onyogho dị elu karịa ngwaọrụ ọ bụla nke ụdị a. Ihe omuma ohuru a biara na Vive Wirelss Adapter, ihe ntaneti ohuru ohuru nke kwekorita ya na nke mbu nke HTC Vive.
Agbanyeghị na Google Glass enweghị ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ Mountain View na-atụ anya ya, ụlọ ọrụ China bụ Lenovo, chọrọ nzọ na usoro yiri ya ya na Glass C220, iko ndị na-adịghị ka ndị nke Google, bụ ụdị dị iche iche ma na-enye anyị ikike dị ịtụnanya na eziokwu dịwanye elu. Igwe ndị a ga-amalite usoro nyocha ha n'ime afọ a, a ga-akwụ ụgwọ ya ihe dịka $ 1.800 ma kụọ ahịa na mbido afọ na-abịa.
CES 2018 na Mgbakọ
Companylọ ọrụ Taiwanese egosila ọgbọ ọhụrụ nke edetu, abụọ elu dị ka ntinye ntinyea, na-agbakwunye dị ka isi ihe ọhụrụ na ndakọrịta na Amazon Alexa nnyemaaka, ngwaọrụ na njikọ LTE njikọ. N’isiokwu a, anyị gosiri gị ụdị ọhụụ niile Acer gosipụtara na CES emere na Las Vegas.
La Mpempe akwụkwọ edetu Dell XPS 13 arụzigharị kpamkpam na-emezigharị kpamkpam ọ bụghị naanị ụdị nke njikọ, kamakwa mkpebi ha, na-enye anyị a elu nke nso na a ihuenyo mmetụ na 4k mkpebi. Ogologo ya ruru 11,6 milimita na ibu nke kilogram 1,22, na-eme ka ọ bụrụ akwụkwọ ọgụgụ ultra nke anyị agaghị achọpụta na anyị na-ebu. Banyere njikọ ndị ahụ, XPS 13 2018 na-enye anyị ọdụ ụgbọ mmiri abụọ nke Thunderbolt 3, nnwere onwe ruru elekere 20, ọ kwadebere ya site na ndị na-arụ ọrụ i5 na i7 tinyere 4, 8 ma ọ bụ 16 GB nke ụdị DDR3. Banyere nchekwa, Dell na-enye anyị ụdị 128, 256 na 516 ụdị SSD ma ọ bụ 1 TB SSD ụdị PCI.
El Lenovo Miix 630 Ọ na-enye anyị ihe nwere ike ịgbanwe, yabụ anyị ga-enwe ike iji ya dị ka mbadamba na laptọọpụ n'onwe ya, ekele maka keyboard nke a na-ere yana akụrụngwa. N'ime anyị na-ahụ Qualcomm's Snapdragon 835, tinyere 8 GB nke RAM na 256 GB SSD. N'ịbụ onye nhazi na ụlọ ọrụ ARM, Miix 630 na-enye anyị nnwere onwe nke oge 20, ihuenyo 12.3-inch na mkpebi HD zuru oke. N'ime, anyị na-ahụ Windows 10 S ma a ga-akwụ ụgwọ ya na 800 euro.
Asus ewepụtala PC dị iche iche dị iche iche, nke anyị nwere ike lbuo site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ nke ọzọ nwere ike karịrị ike iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, gụnyere ihe atụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke kpochapụwo Pi. Enwere ike ịchọta ozi niile gbasara ụdị Asus ọhụrụ na Akụkọ a.
CES 2018 na ụda
JBL na-ekwuputa igwe okwu okwu ya
Jlọ ọrụ JBL ejiriwo usoro CES mee ihe iji megharịa ya Obere ngwaọrụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ n'etiti nke anyị na-ahụ JBL Clip 3, JBL Go 2 na JBL Xtreme 2.
AKG, nke bu otu uzo dika JBL, Harman International, nke n’aka nke onye Korea bu Samsung, gosiputara AKG N5005, ekwe ekwe dị elu maka ndị hụrụ egwu n'anya ọnụ ha dị na $ 999 ha na-enye anyị atụmatụ ndị a na-ahụtụbeghị mbụ na ekweisi ntị.
CES 2018 na akụrụngwa
Byton, SUV nke ọdịnihu
Ọ bụghị naanị na mmadụ na-ebi na Tesla, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ Elon Musk na-aga n'ihu ịbụ akwụkwọ maka ụwa ụgbọ ala eletrik, taa anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na-arụ ọrụ ịmalite ụgbọ ala eletrik na ahịa, ee, n'ọtụtụ oge, A na-eji ụdị ndị a eme ihe maka ndị bara ọgaranya. N'ụzọ dị mma, Elon Musk bụ naanị onye chere banyere ọha mmadụ na Model 3. companylọ ọrụ China Byton emeela ka ọha na eze mara ihe ga-abụ ụgbọ ala eletrik mbụ ya, nnukwu oche anọ nwere SUV (4,85 mita ogologo) na ebe ọ na-eguzo pụọ maka adịghị adị nke enyo ma ọ bụ aka iji mepee ụgbọ ala, ebe ọ bụ na a ga-eme usoro a na-akpaghị aka mgbe ụgbọ ahụ na-achọpụta ihu anyị. Ozi ndi ozo banyere Byton SUV Electric.
Onye nrụpụta Fisker gosipụtara n'ihu ọha, dịka o kwupụtara ọnwa ole na ole gara aga, nkwa ụlọ ọrụ ahụ ga-asọmpi na ụgbọ ala egwuregwu eletriki nke Tesla, yana Fisker E-motion, ihe atụ ga-ada ahịa maka $ 129.000 na nke na-enye anyị nnwere onwe nke 650 kilomita na oke ọsọ ọsọ nke 250 km / hour na osooso site na 0 ruo 100 naanị na 3 sekọnds. Ozi ndi ozo banyere Fisker e-motion.
CES 2018 na robotik
Nwa nkịta Sony, Aibo, na-enweta ndozi
Sony anọgidewo na-arụ ọrụ na ezigbo mma nkịta robotic nke webatara n'afọ gara aga, ma ugbu a ọ bụ robot dị nkọ karịa na nke na-atọ ụtọ karịa nke bu ya ụzọ. Na ọgụgụ isi Ọ bụ akụkụ nke ime ma nwee ike iso ndị mmadụ na-emekọ ihe dịka a ga - asị na ọ bụ anụmanụ n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Kasị mma nke CES 2018
Project Linda ma ọ bụ mgbe ekwentị Razer gị ghọrọ laptọọpụ